Blender 2.82, ikozvino yawanikwa diki yekuvandudza ine yakawanda yekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Blender 2.82, ikozvino yawanikwa diki yekuvandudza mune dzidziso iyo inounza kuwanda kwakawanda
Ingori pasi pemwedzi mitatu mushure meiyo previous version, Blender Foundation yakatanga Blender 2.82, chitsva chitsva cheiyo 3D yekugadzirisa mifananidzo software, modelling, nezvimwe, izvo zvavanokura. Izvo zvavave vachitipa isu kwemaawa mashoma inguva nyowani vhezheni, iyo inofanirwa kungouya chete kuzogadzirisa zvikanganiso, asi mune ino mamiriro eBlender kugadzirisa, mabasa matsva akaverengerwa, mamwe acho achifadza.
Pamusoro pezvinhu zvitsva, zvatichataura gare gare, Blender 2.82 yakaunza zvinopfuura 1000 zvigadzirisoChikonzero chakaringana kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona nekuti, neiyi, software ichapindura zvirinani pane iyo vhezheni yakaburitswa mwedzi mitatu yapfuura. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kusarudzika nhau uye yepamutemo vhidhiyo mharidzo yeBlender 2.82.
Pfungwa dzeBlender 2.82
Tsigiro yeUDIM uye USD.
MantaFlow fluids uye utsi simulation rutsigiro.
AI kuderedzwa kweruzha.
Girisa bhurasho kugadzirisa.
Mikana yekugadzira zvinwiwa zvinwiwa neiyo nyowani FLIP mhinduro.
Yakagadziridzwa jira kuenzanisa.
Kubvisa ruzha: eIyo Albedo nhanho yakawedzeredzwa kuti ishande zvirinani neOpenImageDenoise composer node. Iyo Normal pass yakachinjwa kuti ibude mukamuri nzvimbo kuti ushande zvirinani neiyo denoiser OptiX.
Kupa kumhanya paWindows kwagadziridzwa.
Clip Mask opareta - Inobvisa masikisi akavharika kubva pa mesh, iine sarudzo dzekuzadza maburi akagadzirwa kana kugadzira chinhu chitsva chine mesh nemaburi akabviswa.
Iyo symmetrize opareta ikozvino inogona kumhanya neDyntopo yakaremara.
Muenzaniso wekuenzanisira saizi opareta ikozvino unoshanda neye voxel chiyeuchidzo. Inoisa saizi yevoxel kune iyo kukosha iyo inogadzira mesh ine resolution yedudziro inosvika kune iyo nzvimbo yakaratidzirwa.
Mushandisi interface yakwenenzverwa.
Iwe une ruzivo rwese pane iyi kuburitswa uye iwe unogona kukopa software yacho kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vanogona zvakare kurodha yako snap package uye vhezheni yayo mu Flatpak, asi chinonakidza ndechekuti, kunyangwe ichigara ichipesana, iyo Flathub vhezheni haisati yagadziriswa. Uye hatifanirwe kukanganwa kuti pane vhezheni inowanikwa mumahofisi epamutemo ezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux, asi parizvino mune mazhinji, chete v2.80 yeiyo software ichiripo. Kana iwe ukaedza iyo nyowani vhezheni, inzwa wakasununguka kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Blender 2.82, ikozvino yawanikwa diki yekuvandudza mune dzidziso iyo inounza kuwanda kwakawanda
Vakuru veBritish vanozvisiyanisa kubva kune inopokana posita nezve Kali Linux uye imwe software